Njem si Rome gaa na Paris Site na Zụọnụ Elu | Save A Train
Home > Zụọnụ Ndụmọdụ > Njem si Rome gaa na Paris Site na Zụọnụ Elu
(Emelitere ikpeazụ On: 14/05/2020)
Paris na Rome na-na-ahụ n'elu nke fọrọ nke nta ọ bụla njem ịwụ ndepụta. Ndị a ikpọ obodo na-ewu ewu maka na ọdịbendị ha, ụwa-klas nri, atọkwa ije na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Mgbe Rome na Paris bụ ebe dị anya, ha dị nnọọ mma ejikọrọ na ụgbọ okporo ígwè. Nke a pụtara na ị na-adịghị na-ahọrọ n'etiti ndị a ebube obodo, i nwere ike ịga leta ha ma! Iji nyere gị aka ime ka a njem dị ka na-atọ ụtọ dị ka omume anyị na-eso gị otu esi aga Rome site na Paris site na Highspeed Train.
Travel site elu-ọsọ ụgbọ oloko
Ị pụrụ ọsọ site France na Italy na-eji naanị elu-ọsọ njikọ. Otu n'ime ihe ndị kasị na kasị ala ụzọ njem site na Rome na Paris bụ site na-ewere Thello elu-ọsọ ụgbọ okporo. Nke a dịkọrọ ndụ ụgbọ okporo ígwè ga-whisk na Paris na oge. First, will ga-eji ụgbọ elu ga-aga Rome na Milan na Milan gaa Paris na ọdụ ụgbọ elu dị elu nke Thello. The njem oge maka nke a njem dịgasị, dabere na nke na-azụ ị bulie. Anyị nwere ike ikwu na ị akwụkwọ gị oche n'ọdịnihu dị ka ị ga- ka abụọ ndị a na ụgbọ oloko ka e meere a oche.
Lyon ruo Oge Nice Train
Were sinik ụzọ – Rome na Paris site na Highinpeed Train
Dabere n'okporo ụzọ i kpebiri isi mgbe ị ga-esi Rome site na ụgbọ elu Rome gaa Paris, ị pụrụ iji na-enwe ịgagharị otu n'ime ndị mara mma na obodo nta nke France n'ụzọ. Nice soaks elu ebube nke Provence na mbak ya site na ya ọmarịcha osimiri, irutụrụ eme mkpagharị na ghe oghe ahịa. Nkwụsị apụ na Nice ga-ekwe ka ị na-ahụ ọzọ pụtara akụkụ nke France na ga omume ọma gbasaa njem gị site Rome ka Paris.
Dijon na Provence Ụgbọ oloko
Paris na Provence Ụgbọ oloko
Lyon na Provence Ụgbọ oloko
Marseilles na Provence Ụgbọ oloko
Gaa na ndị ọzọ European obodo n'ụzọ
Mee ka ọtụtụ n'ime gị nnwere onwe site na iji mpaghara ụgbọ oloko na ịkwụsị anya na ndị ọzọ European obodo. Njem site Rome ka Milan, na na Geneva tupu i ruo gị ebe – Paris.
No ụgbọ okporo ígwè njem bụ ihe karịrị awa anọ ogologo. Nke a na-eme ka a zuru okè ụzọ maka ihe ọ bụla onye njem onye na-enweghị mmasị ogologo ụgbọ okporo ígwè agafe. Ọ dị mma iburu n'uche na ụfọdụ obodo ndị ọzọ dị oké ọnụ ileta karịa ndị ọzọ, ka dabere na gị ego i nwere ike na-ahọrọ ihe njegasi nke ahụ anaghị agụnye obodo niile anyị depụtara. Lelee ebe nrụọrụ weebụ anyị ma ị nwere ike ịme usoro nke gị iji mee ka gị si Rome gaa Paris site na ụgbọ oloko dị elu kamakwa Site na Paris gaa Rome na otu okporo ụzọ ụgbọ oloko.. I nwekwara ike na-ruo ụbọchị na ọhụrụ n'ọkwá na anyị Facebook, Twitter na Instagram peeji nke.
Na-eche echiche banyere na-eme nke a ụzọ si na Rom Paris onwe gị? gaa SaveATrain Online elele niile anyị nanị n'ego ụgbọ na-amalite na-eme atụmatụ gị ọzọ njem!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhow-to-get-from-rome-to-paris-by-train%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#geneva Roma Train Travel njem travelparis travelrome
Ejegharị Site Genoa Iji Florence Site Train